I-NAD + ekwaluphaleni: Indima ye-(NR) yeNicotinamide Riboside yeChloride Inyaniso kwi-Anti-ukuguga
I-NAD + i-Precursors in Aging: Indima ye-(NR) yeNicotinamide Riboside Chloride Inyaniso ku-Anti-ukuguga
Nicotinamide riboside (NR) kunye nicotinamide riboside (chloride)
I-Nicotinamide riboside (NR) i-chloride yohlobo lwe-nicotinamide riboside (NR).
1.Yintoni iNicotinamide Riboside (NR)?
I-NR luhlobo lwevithamini B3 okanye i-niacin. Ikhompawundi yafunyanwa kwiminyaka ye-1940 njengento yokukhula H. umkhuhlane. Ekuqaleni kwama-21st kwinkulungwane, amanqaku ophando aya kungqina ukuba i-NR ngumanduleli we-NAD +. Emzimbeni womntu, esi sondlo sihlisa amanqanaba e-cholesterol, sinciphisa umngcipheko wezifo zentliziyo, sonyusa ukusebenza kwengqondo, kwaye sinciphise isifo samathambo.
I-Nicotinamide riboside (NR) yi-pyridine-nucleoside, esebenza njenge-precursor kwi-NAD + (Nicotinamide adenine dinucleotide). I-NAD + ibasa imisebenzi emininzi yebhayiloji kubandakanya ukulungiswa kwe-DNA, ukuveliswa kwamandla eselula, ukuseta isingqisho somzimba, kunye nokunye. Ngelishwa, ezi molekyuli ziyehla ngokwendalo.
2.Yintoni iNicotinamide Riboside (NR) yeChloride?
INicotinamide Riboside (NR) chloride (NIAGEN) sisiphumo seNR kunye neklorine. Ikhompawundi inyusa amanqanaba e-NAD + kwaye isebenze nge-SIRT1 kunye ne-SIRT3. Iguqula ukwaluphala ngokwandisa imetabolism ye-oxidative kunye nokulwa nezinto zokutya ezinxulumene nokutya.
E-US, nicotinamide riboside chloride yaziwa ngokubanzi njengekhuselekileyo. Ke ngoko, sisithako sokutya esivunyiweyo sokusetyenziselwa ukungcangcazela kweprotein, amanzi eevithamini, iintsini, nokunye okunxulumene noko nezongezo.
Ubuntu buye balwa nokuguga ngokujolisa kulusu. Ngamaxesha athile, kuya kufuneka ukuba ukhe ufumane ezinye zazo ukuguga Iikhrim zokucoca imibimbi yobuso obunzulu, isikhumba esixhomayo kunye nebala. Nangona kunjalo, olu nyango aluguquki kwaye lufutshane. Indlela eqinisekisiweyo yokuguga ngobubele kukuseka utshintsho lwebhayoloji emva kwesensence kunye nokujongana nengcambu.
Abaphandi baseke unxibelelwano phakathi kwamanqanaba asezantsi e-NAD + kunye nezifo ezinxulumene nobudala. Oku kufunyanwa ngokuqatha kuye kwayingqameko kwikhekhe kumgangatho wezonyango ngokwandisa amathuba okubuyisa inkqubo yokwaluphala. Ngesi sizathu, Nicotinamide riboside chloride powder uye rhoqo kwiipaseji zelebhu zophando lweklinikhi ngenxa yokusebenza kwayo ekubhukuqeni iwotshi yebhayiloji.
Ukuchazwa kweMichiza yeNicotinamide Riboside (Chloride) Powder
Indawo yokugcina -20 ° C Ifreezer
Ukwazi izibonelelo zeNicotinamide riboside (NR), ziziphi izibonelelo zeNicotinamide Riboside Chloride?
Izibonelelo ze-nicotinamide riboside chloride vs nicotinamide riboside ziyafana kuba zombini zisebenza ukwenza i-NAD kunye ne-sirtuin 1 protein.
IMetabolism eseMpilo yokuLawula ukutyeba kakhulu
Amanqaku ophando aqinisekisile ukusebenza kwe-nicotinamide riboside chloride ekwehliseni ubunzima. Abasebenzisi banokuphulukana ukuya kuthi ga kwi-10% yamafutha omzimba ngaphandle kokuncitshiswa kokutya okanye uqeqesho lomzimba.
Ukuthatha iyeza kunceda ukunciphisa i-cholesterol ye-LDL ngelixa unyusa amanqanaba e-cholesterol elungileyo. Oku kwenzeka xa kugcina isenzo se-enzymes ejongene nokuhlanganiswa kwe-triglycerides. Ngenxa yoko, ukuveliswa kweepoprotein ezixineneyo.
I-Nicotinamide riboside chloride izibonelelo abaguli abatyebe kakhulu abanesifo seswekile. Isongezelelo sonyusa imetabolism ngokuphucula ukunganyamezelani kweglucose
Xa amanqanaba e-NAD ewela ngaphantsi kokulungileyo, inkqubo yakho ye-neurological kunye nempilo yokuqonda inokuba semngciphekweni. Thatha, umzekelo, abaguli abanesifo se-Alzheimer babonisa uxinzelelo lwe-NAD + kunye nokungasebenzi kakuhle kwemitochondria.
Phakathi kokusetyenziswa kweklinikhi ye-nicotinamide riboside chloride, ulawulo lwe-neurodegeneration ekugugeni phezulu phezulu kuluhlu. Iyeza lisebenza ngokuchasene nomonakalo we-intracerebral, ukubetha kweschemic, ukudumba kwemithambo-luvo kunye nokufa kwe-neuronal.
Enye yezona zinto ziphambili ekusebenziseni iNicotinamide riboside chloride kubandakanya ukukhuthaza enempilo ukwaluphala. I-compound ikhokelela ekunyuseni kwimveliso ye-NAD, edlala indima ebalulekileyo kwiseli. Umzekelo, inyusa amanqanaba eselula ngaphakathi kwezihlunu, isibindi kunye nezintso. Ngaphandle koko, iNicotinamide riboside chloride ithintela i-senescence ngokwandisa ukujikeleza kwegazi kula malungu abalulekileyo.
I-Nicotinamide riboside chloride izuzisa ngokwenziwa kwemfuza ngokulungisa iDNA endala neyonakeleyo. Ukuba uxinzelelo lwe-NAD luwa, i-deoxyribonucleic acid eyenzakeleyo inokubangela iintlobo zeoksijini ezisebenzayo, zikhokelele kuxinzelelo lwe-oxidative, kunye nokuchaphazeleka komhlaza.
Ungenza njani uNicotinamide Riboside Chloride Reverse?
Ngexesha lokuguga, umzimba uhlangabezana notshintsho lomzimba njengoko imisebenzi yeselula ibuyela umva. Umzekelo, umzimba uphelisa iiprotein ze-NAD + kunye ne-SIRT1 kunokuba unokwenza. Amanqanaba asezantsi ezi coenzymes akhawulezisa i-senescence ngelixa esenza izinto ezinxulumene nobudala kubandakanya isifo seswekile, izifo zentliziyo, kunye nokukhuluphala.
Ukulawula i-nicotinamide riboside chloride izibonelelo zomzimba ngokwandisa imithambo yegazi, enjengee-lymphocyte kunye ne-leucocytes. Ikhompawundi iphinda idibanise ukuhlanganiswa kwe-NAD +, yiyo loo nto, inyusa amanqanaba eeproteni ze-SIRT1. Ngenxa yoko, i-SIRT1 icothisa ukuguga kwemithambo ngokunyusa ukuhamba kwegazi kwezihlunu zamathambo, inkqubo yentliziyo, kunye nezicubu zemithambo-luvo.
Ngaphandle koko, nicotinamide riboside chloride isongezelelo kuguqula ukwaluphala Ngokuvelisa ngaphezulu i-NAD + ukunceda kulungiso lwe-DNA ngaphakathi kolwakhiwo lweselula. Esi siphumo sithintela uxinzelelo lwe-oxidative
Uphando olukhoyo luqinisekisa ukuba i-nicotinamide riboside chloride counters depletion depletion, ukwehla kwemveliso yeinyembezi, kunye ne-fundus hypopigmentation. Zonke ezi meko zixhaphakile kubantu abadala.
Abanduleli beNAD⁺: INicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Mononucleotide
Ngaphezulu kwesihlanu se-NAD + eyandulelayo kodwa okwangoku, sinokutshintsha ukugxila kwi-nicotinamide riboside chloride vs Inicotinamide mononucleotide (NMN).
Ezi zinto zimbini zandisa amanqanaba e-NAD + emzimbeni ukuphucula imisebenzi yeselfowuni kunye nokucothisa i-senescence.
Yintoni exelela aba babini bahlukeneyo kukuba i-NMN ayisiyo fomu ye-vitamin B3. Imichiza ayingeni kwiseli ide iguqulele kwi-nicotinamide riboside. Isizathu kukuba ubungakanani bayo beemolekyuli bukhulu kakhulu kunobo nicotinamide riboside chloride powder. Ngenxa yale propati, ukungafumaneki kwe-NMN kunye nethemba layo lokuvula amanqanaba e-NAD + ibilithambo lokuxabana kwindawo yophando.
NgokukaGqirha Sinclair, ugqirha wezofuzo kwiYunivesithi yaseHarvard, ukusebenza kweNMN akunakuthelekiswa nanto. Uyavuma ukuba uyayisebenzisa le nto zongeza, emenza azive esemncinci kwaye evuseleleka. I-Sinclair ilingana nokusebenza kwe-NMN ekusebenzeni kwi-treadmill. Isazinzulu siqaphele ukuba siphucula ukujikeleza kwegazi, sikhuthaza ukunyamezeleka kwemisipha kunye nokusebenza kakuhle kwemetabolism.
Kwelinye icala, iNicotinamide riboside chloride ithathwa ngokuthe ngqo yiseli. Imolekyuli yenye yeVithamini B3 engenye. Iya kwandisa amanqanaba e-NAD + ngaphezulu kwe-60% emzimbeni womntu. Ngokungafaniyo uninzi Abanduleli be-NADEzikuluhlu lokubukela lwe-FDA, i-nicotinamide riboside (NR) ye-chloride ikwisigunyaziso se-GRAS (Ngokuqhelekileyo ibonwa njengekhuselekileyo) kwimveliso yokutya.
Kutheni ungathathi i-NAD powder ngokuthe ngqo? INicotinamide Riboside Chloride vs iNicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)
Kuba ukugxila kwethu kukuphakamisa i-NAD emzimbeni, usenokubuza ukuba kutheni ingxabano malunga nenicotinamide riboside chloride. Akufanelekanga ukuba ulawule NAD ngqo kwinkqubo yakho endaweni yokuhamba kobunzima bokusebenzisa abaphakathi njenge-NIAGEN, NR, okanye i-NMN? Ewe, ndivumele ndikwazise ngokufutshane malunga nenicotinamide riboside chloride vs nicotinamide adenine dinucleotide.
Esona sizathu siphambili sokuba ungaze uthathe i-NAD ngqo kukuba i-biomarker ayinakulinganiswa neseli.
Ukudityaniswa kokusebenzisa i-nicotinamide riboside chloride vs nicotinamide adenine dinucleotide kukuba eyokuqala iyakwazi ukugqobhoza inwebu yeplasmic. Inqanaba lokufunxwa kwalo liphezulu kakhulu ngenkqubo yokwetyisa, kwigazi, kwaye ekugqibeleni liye kwingqondo.
Inqanaba leNicotinamide riboside (NR) yeChloride: Ungayisebenzisa njani?
Ngo-2016, i-nicotinamide riboside chloride supplement yaphumelela imeko ye-GRAS. Kunyaka ophelileyo, i-FDA yayivumile njengomthombo we-niacin kunye nesithako sokutya kwidosi yemihla ngemihla ye-180mg.
Okwangoku, ubuninzi belayisensi ye-nicotinamide riboside chloride yedosi ukuya kwi-300mg ngosuku. Nangona kunjalo, kolunye uvavanyo lomntu, izifundo ziya kuthi zifike kwi-2000mg yeyeza. Kufuneka uqaphele ukuba ukugqitha idosi eyi-500mg kuya kukhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga ze-nicotinamide riboside.
Idosi ye-niacin isebenza kuphela enempilo Abantu abadala, kubandakanya nabasetyhini abakhulelweyo kunye noomama abancancisayo.
Iziphumo zeNicotinamide Riboside zeChloride: Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa iNicotinamide Riboside Chloride Supplement?
I-Nicotinamide riboside chloride powder ikhuselekile kwaye ibambe imeko enqwenelekayo yezinto ze-GRAS. Le nyaniso ayithethi ukuba ikhompawundi ayinazo iimpawu ezibi. Emva kwayo yonke loo nto, amanzi abubomi kodwa ayatsala kwakhona xa uzisebenzisa kakubi. Ukulwa neziphumo ebezingalindelekanga, qinisekisa ukuba idosi yakho yeNicotinamide riboside chloride iphantsi kangangoko kunokwenzeka.
Ezinye zeempendulo ezigwenxa zibandakanya;
Ulusu ukuphendula ezifana irhashalala kunye nokwanda ukugruzuka
Ngaphandle kwezi ziphumo zingasentla ze-nicotinamide riboside chloride, kunokwenzeka ukuba ube namava ukuhla ukusinda. Nangona kunjalo, esi siphumo siyintsikelelo yokuzifihla ngakumbi ukuba ungaphezulu komzimba, ukutyeba kakhulu, okanye uzama ukugcina ubunzima bakho bukhangelwe.
Ungayithenga phi (NR) iNicotinamide Riboside Chloride ngobuninzi?
Unokwenza i-nicotinamide riboside chloride ithenge kwivenkile ekwi-intanethi. Nokuba ufuna i-powder-grade-powder powder ngobuninzi okanye isongezelelo sebanga lokutya, qiniseka ukuba ujonge umthengisi okwenyani. Ukudityaniswa kokuthenga okuqinisekileyo kukuba unokuthelekisa amaxabiso kwaye ujonge ingxelo yexesha langempela kubathengi. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba uwele kumgunyathi.
Siluphawu oluthembekileyo kwaye zonke iimveliso zethu zihambelana nemilinganiselo yolawulo lomgangatho. Sijongana neekhemikhali ezahlukeneyo kwaye izongezo zokutya. Nxibelelana nathi nge-odolo yakho kunye nekoteyishini enobuhlobo.
Ikhonkco, D., Brenner, C., kunye neKruger, CL (2019). Ukhuseleko kunye neMetabolism yoLawulo lweXesha elide le-NIAGEN (I-Nicotinamide Riboside Chloride) kwi-Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial of Healthy Overweight Adult. IiNgxelo zeSayensi.
IBogan, KL kunye neBrenner, C. (2008). I-Nicotinic Acid, iNicotinamide, kunye neNicotinamide Riboside: Uvavanyo lweMolekyuli ye-NAD + ye-Vitamin eyandulelayo kwiZondlo zaBantu. Uphengululo lonyaka lweZondlo.
UMehmel, M., Jovanovic, N., kunye noSpitz, U. (2020). INicotinamide Riboside-Imeko yangoku yoPhando kunye nokuSetyenziswa koNyango.
UTrck, D., uCastenimiller, uJ., Et al. (2019). Ukhuseleko lweNicotinamide Riboside Chloride njengeNoveli yokutya ngokuhambelana noMmiselo (EU) 2015/2283 kunye nokuFumaneka kweNicotinamide kulo Mthombo, kuMxholo woMyalelo 2002/46 / EC. Ijenali ye-EFSA.
U-Elhassan, YS okqhubekayo. (2019). I-Nicotinamide Riboside yongeza i-Aged Human Skeletal Muscle NAD + iMetabolome kwaye yenza i-Transcriptomic kunye ne-Anti-Inflammatory Signature. Iingxelo zeseli.
Aman, Y., Qiu, Y., Tao, J., kunye noFang, EF (2018). Unyango olunokubakho lokunyusa i-NAD + ekugugeni nakwizifo ezinxulumene nobudala. Unyango lokuTolika lokuGuga.
UMBUTHO WOKUGQIBELA WENKONZO YONONOTLEAMIDE (NMN) PONDER (1094-61-7)
Umgubo we-RAW LORCASERIN HCL (846589-98-8)
1.Nicotinamide riboside (NR) kunye nicotinamide riboside (chloride)
2.The Chemical Ukucaciswa Nicotinamide Riboside (chloride) Powder
3. Ukwazi iinzuzo zeNicotinamide riboside (NR), zithini izibonelelo zeNicotinamide Riboside Chloride?
4.Ungayenza njani iNicotinamide Riboside chloride ukubuyisa ukuguga?
5.NAD⁺ Precursors: INicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Mononucleotide
7.Nicotinamide riboside (NR) yeChloride Isikali: Usetyenziswa njani?
8.Nicotinamide Riboside Chloride Iziphumo: Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa iNicotinamide Riboside chloride Supplement?
9.Uthenga phi (NR) iNicotinamide Riboside Chloride ngobuninzi?